Nweta nkwalite gị iji merie Stick Wars 2 | Gam akporosis
Kwalite ndị agha gị ma tinye ha n’ebe kwesịrị ha Stick Wars 2: Battle of Legions
Stick Wars 2: Agha nke Legions nwere ike ị drinkụ mmiri site na isi iyi Agha Legions n'ike mmụọ nsọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị egwuregwu na ụdị a nke anyi tinye otutu nkewa, nke mere na ha na agha imegide onye iro.
Dị ka anyị nwere ndị niile "agha cheesi", dị ka Ike & Ime Anwansi: Chess Royale, nke anyị na-eme otu ihe, ma site na uzo ozo. Na nke anyị nwere taa, echiche ahụ dị n'akụkụ ma anyị nwere ikike ịkwalite nkeji mgbe anyị na-ewepụta otu ọhụụ nke otu ụdị. Ya mere, anyị ga-egosi gị egwuregwu nwere ahụhụ nke anaghị ahụrụ.
1 Were onye na-akpụ gị n’agha
2 Kwalite ndị agha gị site na ijikọta ndị otu ụdị Stick Wars 2: Agha nke Legions
3 Enweghị ụda n'oge ahụ
Were onye na-akpụ gị n’agha
Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ mkpisi na Storelọ Ahịa Play ga-eweputa otutu egwuregwu dabere na bebi ndị a na-adịgide adịgide dị ka nsonaazụ nke a na-eji ihe ndabere kachasị dị ala nke echiche mmadụ: isi, ahụ ya na akụkụ dị elu na nke ala ya.
Lee anyị nwere ha ọzọ maka kpọba ha n’ọgụ nke na-akpaghị aka, na nke anyị onwe anyị ga-elekọta ịchọta ha tupu anyị aga agha.
Mgbe ọkwa ọ bụla gasịrị, na Stick Wars 2: Agha nke Legions anyị nwere ike ịmepụta onye ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ chere ịghara inye ha, ka anyị kwuo; ma ọ bụghị na anyị ga-eri "iri" mgbasa ozi Oge 30 nke abụọ.
Kwalite ndị agha gị site na ijikọta ndị otu ụdị Stick Wars 2: Agha nke Legions
Na ọkwa mbụ anyị ahụghịkwa ụdị nsogbu ọ bụla ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị anaghị emeghe igbe mkpọsa na mgbasa ozi ma ọ bụ mepụta ụfọdụ ndị agha na otu mgbasa ozi 30 nke abụọ; ma lee anya na ha gaara eji sekọnd 5, mana ọ nweghị ihe ọ bụla ...
Iji melite ndị agha anyị, anyị ga na-ejikọta nkeji nke otu ụdị ya mere ha ji arịgo n'ọkwa. Ka anyị na-aga n’ihu, a ga-emegheghe nkeji ọhụrụ dịka ndị na-agba ụta, nnukwu trolls na ndị ọzọ.
na na-egwu eziokwu na-agafe ngwa ngwa na usoro isi ike bụ na ọ nweghị adị na ọkwa mbụ, ya mere echegbula, ebe ọ bụ na ị gaghị ezute ụdị ọ bụla nke iguzogide.
Enweghị ụda n'oge ahụ
Mmelite wụlitere ụbọchị ole na ole gara aga ma anyị nwere olile anya na ọ ga-edozi ahụhụ dị ezigbo mkpa. Ọ bụkwa n’egwuregwu ndị ahụ enweghị ụda; ee, a na-anụ mgbasa ozi ahụ na-atụ egwu ... A ahụhụ anyị nwere olileanya na ha ga-edozi n'oge na-adịghị anya, ebe ọ bụ na ọ dị ka anyị na-eche otu n'ime ihe nkiri ojii na oji na-agbachi nkịtị site na mmalite narị afọ nke iri abụọ.
Na ọkwa niile Agha Stick 2: Agha nke Legions abụghị na ọ kwụpụ ma ọlị, kama nke ahụ na anyị nwere ndidi dị mkpa iji nwee ọganihu na ndị agha ahụ nwere ọtụtụ nkeji na-alụ ọgụ. Egwuregwu dị mfe dị mfe, mana nke nwere nke ya ma ọ bụrụ na ịchọta isi okwu gị.
Stick Wars 2: Agha nke Legions dị maka n'efu site na Storelọ Ahịa Play, maka ugbu a jiri ụda na-ada ụda, yabụ ịnwere ike iburu ndị nnupụisi ahụ ịlụ agha.
Egwuregwu ndị ga-eme ka anyị nwee ọgụ ọgụ na nke ahụ dị mfe.
Usoro edemede: 5,1
Ọnụ ọgụgụ nke nkeji na-aga na-alụ ọgụ
Enweghị ụda ụdị ọ bụla
Mara mma dị mfe
Agha Stick: Agha nke Legions
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Kwalite ndị agha gị ma tinye ha n’ebe kwesịrị ha Stick Wars 2: Battle of Legions
Otu esi egbochi One UI 3.0 imechi ngwa egwu
[VIDEO] Ime Anwansi na Gchịkọta, egwuregwu kacha mma Androidsis nke ọnwa maka February